प्रबास Archives ⋆ Page7of 8 ⋆ Palpalko.com::No.One news portal from nepal.
मलेसियामा ट्याक्सीको ठक्कर बाट एक नेपाली यूवकको मृत्यु
मलेसियामा सवारी दुर्घटनामा परि एक नेपालीको ज्यान गएको छ । मलेसियाको जोरबारुमा सवारी दुर्घटनामा परेर शनिबार राती एक नेपाली युवकको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा रोजगारीको लागि मलेसियामा कार्यरत पाँचथर मेमेङ ५ का २४ वर्षिय विक्रम राई रहेका छन् । हिजो राती उनी काम…
मलेसियामा मोरङका रत्नको शव अलपत्र
मलेसियामा लामो समय देखि रोजगारी गर्दै आएका एक नेपालीको शव मलेसियाको सुगाइवुलो अस्पतालमा अलपत्र परेको छ । मृत्यु भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि उक्त नेपाली मोरङ्ग सिजुवा ८ का रत्न लिम्वुको शव नेपाल पठाउन सकिएको छैन् । मलेसियाको सेलेङ्गर राज्यमा रहेको सुगाइवुलोको एक…
साउदी अरबमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण ६५ हजार नेपालीले उद्धारको पर्खाईमा
काठमाडौं – साउदी अरबमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण कम्तीमा ६५ हजार नेपालीले उद्धार पर्खेका छन् । त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक लगायत सुविधा नदिएपछि उनीहरु स्वदेश फर्कन आतुर रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराएको छ । तर,…
मलेसिया देखि अरब सम्मको अर्थतन्त्र धान्दिने जिम्मा छ…नेपालीको !!
म जन्मेको माटो मेरो हो,म सँग बाध्यताको सपना मलेसिया र रहरको सपना अमेरिका छैन। छ त केबल बाध्यताको सपना मलेसिया मात्रै छ । मलेसिया देखि अरब सम्मको अर्थतन्त्र धान्दिने जिम्मा छ, नेपालीको !! नेपालमा बढीरहेको बेरोजगारीले गर्दा आज लाखौं लाख नेपाली युवा युवती मलेसिया…
मलेसियामा स्वाभिमानमाथि बलात्कार गरिरहनेलाई के हामीले सम्मान गरिरहनुपर्छ ?
मलेसिया ८ देखि ९ लाख नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुक, आफ्नो देशमा योग्यता अनुसारको रोजगारी र उचित पारिश्रमिक नपाएर बाध्यता वा रहरले बिदेशीने नेपालीको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ। नेपाल बाट सुने जस्तो नहुने र कल्पना भन्दा धेरै मार्मिक र दर्दनाक छ, मलेसिया। …
कमाएर जीवन सुखी बनाउने सपना देख्दै साउदी अरब पुगेका सात नेपाली जीवनमरणको दोसाँधमा
काठमाडौं – बढी समय बाँच्ने चाहना कसलाई हुँदैन र । धेरै कमाएर जीवन सुखी बनाउने सपना देख्दै साउदी अरब पुगेका सात नेपाली त्यहाँको जेलमा जीवनमरणकै दोसाँधमा छन् । सडक दुर्घटनामा ज्यान लिएको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका उनीहरु साउदी जेलमै जीवनको आशा पालेर बाँचिरहेका छन्…
नेपाली युवती पुगिन् अमेरिकी संसदमा
वाशिंगटन – ललितपुर पाटन घर भएर हाल अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली युवती कञ्चन अमात्यले अमेरिकी कांग्रेसमा युवा तथा बालबालिका फाँटमा चुनिएकी छन् । उनलाई नेपाली युवा तथा बालबालिकाको पक्षमा वकालत गर्न अमेरिकी संसद प्रतिनिधिसभा तथा अमेरिकन कांग्रेसमा उनले यस्तो जिम्मेवारी दिइएको हो । अमात्य…
मलेसियामा एक नेपालीको हतियारधारी लुटेराबाट विभर्ष तरिकाले हत्या
हिजो मलेसियामा एक नेपालीको विभर्स तरिका बाट हत्या भएको छ। हिजो 05/08/2016 मा सुनसरी जिल्ला ईटहरी न.पा.सात घुडकी निवासी बाबु आरसि चौधरी र आमा नयन चौधरी को एक्लो छोरा अन्दाजी वर्ष ३१ को नगेन्द्र चौघरी नेपालमा रहेको डमरु ओभरसिज, कोटेश्वर वाट विगत…
दक्षिण कोरियामा कार्यरत एक नेपालीको सवारी दुर्घटनामा परी घटनास्थलमै मृत्यु
पाँचथर- दक्षिण कोरियामा कार्यरत एक नेपालीको सवारी दुर्घटनामा परी घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा पाल्पाका हेमन्त आचार्य रहेका छन् । यस्तै दुर्घटनामा परेर पाँचथर रानीटार–६ पौवा भन्ज्याङका ३० वर्षीय सुवास मुखिया गम्भीर घाइते भएका…
मलेसियामा राजदूत डा. बस्न्यातले ५५ हजार अबैधानिक नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काए
क्वालालम्पुर । मलेसियामा यदि सकारात्मक काम गर्ने कुनै पनि संघ संस्थाहरु वा कम्पनिहरु छन् भने उनिहरुसंग नेपाली राजदूतावास सहकार्य गर्न सकारात्मक रहेको राजदूत डा. निरञ्जन मान सिं बस्न्यातले बताएका छन् । गत शुक्रबार नयाँ शक्ति नेपाल विदेश विभाग मलेसियाले क्वालालम्पुरमा गरेको भेटघाटमा…